kodiarana fanamoriana kankana, fivoriambe kankana fivoriambe, kitay gaoty
olan'ny kodiarana gearmotor mpanamboatra
Ny boaty boaty mitondra kankana dia mamoaka tsela mpamokatra hatramin'ny 420Nm ary ny ankamaroan'ny maodely dia misy fihemorana ≤30 arc-minitra. Mitady Boxbox Worm Aluminium?
Kitapo kely namboarina
Izahay dia manana reducers hafainganam-pandeha amin'ny kankana mba hanomezana izay ilainao. Fandefasana haingana sy boaty kankana mahery vaika avy amin'ny Torque Transmission. Fidio ny boaty fanamoriana worm ho an'ny vinavina ho an'ny tetik'asa.
Famoriam-boaty boaty fanorana
Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 1000 na 1500RPM, mifototra amin'ny fitsapana fiainana, dia mihena ny refin'ny haingam-pandeha kankana sivy ao amin'ny habe 26 misy ratios manomboka amin'ny 5: 1 ka hatramin'ny 60: 1. boaty fampihenana haingam-pandeha sy fivorian'ny boaty kankana.
Ny boaty fitaterana kankana an'i Sogears dia amin'ny alikaola Aluminium indrindra, ho an'ny kitapo kankana iray.
kitapo gearbox dia hahatratra ny fampihenana haingana ny hafainganam-pandeha
3: boaty boaty 1 mankany amin'ny avo kokoa, manana vidin'ny kitapo kankana kitapo kitapo kitapo avy amin'ny mpanamboatra isika, ho an'ny boaty kankana kely sy boaty boaty, kitapo kankana ao an-trano dia vita amin'ny alimo (Stannum) Bronze, karazana kankana mahazatra sy kankana manokana napetraka, Red Angle Cast Iron kankana reducer, Varitron kankana haingam-pandeha reducer andian-dahatsoratra miorina amin'ny taona maro ny traikefa mampiasa namboarina nify ambonin'ny amin'ny fampitana torque tandroka tsy hita isa.
Reducer amin'ny hafainganam-pandeha mahery vaika
Kitapo fanamoriana fiara
Kitapo mpanamboatra olitra
Ny toetra mampiavaka ny olitra
Ny fatiantoka ny familiana kankana dia mitovy amin'ny fandefasana fitaovana hafa (reducers mifindra) izay endrika koa toy ny pitting, akanjo, fametahana ny tampon'ny nify ary famakiana ny nify kankana. Anisan'ireny, ny nify sy ny kankana nify no nitafy no fahita indrindra. ary ny gluing koa dia mitranga indraindray. Ny lesoka etsy ambony dia mitranga indrindra satria ny boaty boaty mitondra kankana misy haingam-pandeha eo anelanelan'ny tarehin-dambam-bolo dia lehibe, indrindra amin'ny familiana kankana silindrika, kely loatra ny zoro fanosorana 8, ary tsy azo foronina ilay sarimihetsika solika fanerena mahery vaika, ka ny mihena ny fahombiazan'ny fampitana rehefa miakatra ny mari-pana.
Manana mihoatra ny 100 izahay dia injeniera teknolojia famoronana teknolojia maotera matihanina indrindra mba hahazoana antoka fa afaka manolotra vahaolana tsara ho an'ny fampiharana tsy hita isa izahay. Ankoatra ny karazana fenitra fivorian'ny boaty olitra, dia afaka manolotra serivisy efa namboarina ihany koa izahay araka ny fepetra takinao manokana.
Izahay dia manome ny indostrian'ny indostria rehetra manana fahalalana lalina sy ny rindranasa namboarina namboarina ho an'ny milina fanodinana kankana.
Ho an'ireo mpampiasa faran'ny farany, rehefa mila vahaolana fifindran'ny indostria feno sy miray ary mahomby ianao dia tongava atolotra anay;
Ho an'ireo mpivarotra, rehefa mila mpanamboatra azo itokisana ianao manana serivisy kalitao sy tonga lafatra dia tongava atolotra anay.
20 + Taonan'ny
Fampisehoana ambony ho an'ny ankamaroan'ny indostria, miaraka amin'ny Zero backlash Gear mba hanao fahombiazana ambony sy avo lenta kokoa mba hampidina ny vidin'ny fiara-nao.
Haingana sy mahomby
Sogears dia manome tolotra serivisy marobe ho an'ny mpanjifa Transmission & Distribution. Zahao ireo fihenam-bidy kankana izay manokana.
Indostria tsara indrindra
Sogears dia manome ny boaty kodiarana kalitao miendrika kalitao, mitondra kankana amin'ny moto, mihatsara ary maharitra ela kokoa, ny ekipa serivisy no hamolavola ny serivisy fanamoriana boaty kianja tsara indrindra.
Manana ekipa fividianana mavesatra indrindra izahay hitazona ny kalitao avo lenta indrindra amin'ny singa toy ny fanondranana, tombo-tsolika, kiraro miaraka amin'ny kalitao tsara sy ny vidiny mifaninana.
Faly izahay hifampiresaka aminao amin'ny fotoana rehetra.